စပိန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ & ကောင်းကျိုးများ
စပိန်ဟာရီးယန်းကျွန်းဆွယ်ပေါ်အနောက်တောင်ဥရောပ၌တည်ရှိသောအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည် "စပိန်၏နိုင်ငံတော်" ဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်တောင်ဘက်ပြင်သစ်, အင်ဒိုရာနှင့် Biscay ၏ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့ကမြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့မြောက်ဘက်မှ၎င်း၏အရှေ့နှင့်တောင်ဘက်, အနောက်ဘက်နှင့်အနောက်မြောက်ဘက်ပေါ်တူဂီနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအားဖြင့်မြေထဲပင်လယ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နှင့်ဂျီဘရောလ် & မော်ရိုကိုဖြစ်ပါတယ်။ စပိန်နယ်မြေများလည်းအာဖရိကမြောက်ပိုင်းကုန်းမကြီးနှစ်ခုမြို့ကြီးများဆျူးတာနဲ့ Melilla နှင့်တကွ, မြောက်အာဖရိကအတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေကိုချွတ်ပယ်ရီကျွန်းစု, မြေထဲပင်လယ်အတွင်း Balearic ကျွန်းများတို့သည်အဘိဓါန် Moroccan ကမ်းခြေအနီးတွင်အတော်ကြာသေးငယ်တဲ့ကျွန်းများပါဝင်သည်။
စပိန်မြေဧရိယာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 195,300 စတုရန်းမိုင် (500,000 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဥရောပသမဂ္ဂထဲမှာတောင်ပိုင်းဥရောပအကြီးမားဆုံးတိုင်းပြည်အောင်နှင့်ဒုတိယအကြီးဆုံး (အီးယူ) စုစုပေါငျး။ စပိန်ရဲ့လူဦးရေကဥရောပတိုက်တွင်ဆဌမအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်အောင် 46 သန်းမှာခန့်မှန်းထားသည်။ စပိန်ရဲ့မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာမက်ဒရစ်သည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ စပိန်အတွက်ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေကိုလည်း Corporation ဥပဒေအဖြစ်လူသိများသော 1989 အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရေးနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Code ကိုနှင့် Corporation ဥပဒေလိုက်နာပါ။
စပိန်ကော်ပိုရေးရှင်းထိန်းညှိနှစ်ခုကတခြားဥပဒေများဟာလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများဥပဒေနှင့် Mercantile မှတ်ပုံတင်မည်စည်းမျဉ်းဥပဒေရှိပါတယ်။
စပိန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း effecting နောက်ထပ်ဥပဒ 2010 အတွက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိနှင့်စပိန်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ရှယ်ယာမြို့တော်လိုအပ်ချက်များကိုအချို့ကိုပြောင်းလဲပစ်သောမြို့တော်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
• နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု: စပိန်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
• အီးယူအသင်းဝင်: ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, စပိန်နဲ့အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ငွေကြေးယူရိုငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။
• အသေးစား Corporation ကြီးထွားလာချိန်: အဆိုပါစပိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍစပိန်မှာ set up ကုမ္ပဏီများ၏ပတ်ပတ်လည် 90% သေးငယ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်ဖော်ရွေသည်နှင့်တဆယ်န်ထမ်းထက်နည်းပါးလာငှားရမ်းနေ။ ထို့ကြောင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများသည်စပိန်စီးပွားရေးကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စပိန်အစိုးရသည်ဤအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှမက်လုံးပေးကမ်းလှမ်းရန်အများကြီးမရှိပါဘူး။
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင် Corporation: 10,000 ကုမ္ပဏီများသည်ပတ်ပတ်လည်စပိန်အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အစိုးရအအဆက်မပြတ်ဒီနံပါတ်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှာဖွေနေနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှမက်လုံးပေးကမ်းလှမ်းရန်အများကြီးမဖြစ်ပါတယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: စပိန်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များထဲမှရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်ကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကော်ပိုရိတ်နာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုမြော်လင့်နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။
အဆိုပါစပိန်အစိုးရအသစ်အားကော်ပိုရေးရှင်းအဘို့အရွေးချယ်ရေးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကော်ပိုရိတ်အမည်များ website တစ်ခုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နာမတျော၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်သုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရက်ကြာပါသည်။
တစ်ခုမူရင်းကုမ္ပဏီအမည်ကိုကောက်နေပြီးနောက်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်း name ကိုတစ်ပြီးသားရှိပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းကအသုံးပြုမကြောင်း verify လုပ်ဖို့ Mercantile Registry ကိုနှင့်အတူ (အမအမည်ဖြင့်တိုက်ဆိုင်မှုလက်မှတ်အဖြစ်လူသိများ) မှာလက်မှတ်မှတ်ပုံတင်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
စပိန်ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိရမည်။ တစ်ဦးကညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်း entity မဖွစျနိုငျနှင့်ပုဂ္ဂလိကလူတစ်ဦးဖြစ်ရပါမည်။
SL အတွက်အနည်းဆုံးအရင်းအနှီး (Sociedad Limitada, LLC နှင့်ညီမျှသည်) သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
၁။ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ (စပိန်ဘဏ်စာရင်းတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်) သို့မဟုတ်
ယူရို ၃၀၀၀ (သို့) ထို့ထက်ပိုသောတန်ဖိုးရှိကော်ပိုရိတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ (ဥပမာကွန်ပျူတာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းစသည်) ။
SA (Sociedad Anónima - ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်း) အတွက်အနိမ့်ဆုံးအရင်းအနှီးသည်ယူရို ၆၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၅% သာယင်းကိုမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင်ဘဏ်တွင်အပ်နှံရန်လိုအပ်သည်။ ကျန်ရှိသောလုပ်ငန်းများကိုပထမ ၃ နှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အပ်နှံလိမ့်မည်။ သင်ငွေထည့်သောအခါဘဏ်သည်လက်မှတ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Sociedad Anónima (ကော်ပိုရေးရှင်း) ကိုတည်ထောင်ရန်သင်ငွေကိုအပ်နှံလိုက်ပြီဟုပြောလိမ့်မည်။ ဘဏ်ငွေထုတ်ယူရန်သင်ငွေထည့်နိုင်သည်။ နောက်နေ့တွင် ၉၀% ကိုဘဏ်မှထုတ်ယူနိုင်သည်။
2016 ကတည်းကကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 25% ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်သည်အနည်းဆုံးယူရို၏အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာအရင်းအနှီးအပေါ် အခြေခံ၍ ယူရို ၁၂၀၀ ဖြစ်သည်3000.
ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်. စပိန်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့မှတ်တမ်းများအများပြည်သူပွင့်လင်းဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် privacy ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့, ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များရဲ့ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်များအတွက်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက SL (Limited သည်တာဝန်ဝတ္တရားကော်ပိုရေးရှင်း) ကတရားမျှတစွာလွယ်ကူသောစာရင်းကိုင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှိပြီး, တဦးတည်းပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပထမသုံးနှစ်အတွင်း "ရိုးရှင်းသောစာရင်းကိုင်" အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တစ်ခုလုပ် SA (ပုံမှန်ကော်ပိုရေးရှင်း) အတွက်, စာရင်းကိုင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်နှင့်တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ဖြစ်ရမည် ပြီးစီး.
စပိန်ကော်ပိုရေးရှင်း 30 ရက် 40 န်းကျင်ယူတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးစီးအချိန်လျှောက်ထားသူသည်၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ်နာမတျော၏လက်ခံမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်အဖြစ် စာရွက်စာတမ်းများ.
စပိန်ကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်, စပိန်အသေးစားကုမ္ပဏီများသည်ရှင်သန်ရှိရာတစ်ဦးအီးယူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်ရှိထည့်သွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်ကား, နှင့်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးစနစ်များကိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။